ke Level 27 luqala bubi ngokwaneleyo, nakuba Matrix kancinci '’ ngeebhloko emsebenzini. Kukho ezimbalwa uthsuphe wokuba ubugcisa kunye neengcebiswano ezinokusetyenziswa ukuze ufumane le sigaba kunye nenani elichanekileyo izilwanyana wakhulula inani ofanelekileyo basa lendlela yokuqalelisa ikhompyutha!
Okokuqala konke okulungileyo yayo ukwazi ukuba izilwanyana uhle kuphela omnye ngexesha, dont Ungazihluphi uzama ukuzisa phantsi kwakhona kwelinye icala lebhodi ukuba isilwanyana sakho ngci, ngayo umsebenzi nje fudula. Ukuba isilwanyana yakho itrayi pickle uzixhoxhile iibhloko ngeenxa okanye sijolise ezithile combos ezinkulu kwaye usebenzise firecracker!
Sebenzisa ngobulumko uneebhaloni zakho! Kukho eliqela uneebhaloni ezinemibala iphoswe emhlabeni kule bhodi kwaye kungaba Ukugunda kakhulu. Sebenzisa ukuba iibhloko ecacileyo ngaphantsi isilwanyana sakho okanye ukuba bajoyine kweenxweme iibhloko ezifanayo esinombala. Inye kuphela ngcono kunokuba usebenzise ibhaloni omnye ukwenza ezinye combos omkhulu ukusebenzisa ezimbini (imibala eyahlukileyo …igaqa!)
Ukumiswa iibhloko ubani?
Gcina engqondweni le level inani eliqingqiweyo ehamba, 60 enyanisweni kwaye 8 izilwanyana ukubahlangula ngoko ukugcina 'dilly dally’ zimbalwa, unakekele ishishini kuqala, lo mdlalo hayi lokudlala!
Babukele njengokuba sisoloko abahlobo bakho, ukuba imali yokuse- ukuba ahlise isilwanyana, na ingongoma kakhulu kokuligcina okanye 'mini ngemvula’ uya kuba phezu kwenu phambi kwenu xiya!
Lwela ukususa yonke umbala omnye amanqaku iingongoma big, iibhaloni ziluncedo kodwa kubalulekile ukwenza le nto. Kokufaka iinkwenkwezi ezintathu nice kodwa khumbula ephambili wakho awakhulula izilwanyana ezincinane amahlwempu! ukusebenza nje umhlathi omnye ngexesha yaye uya kuba oku kwenziwa akukho xesha. Ukuba unayo eminye oshukunyiswa aseleyo oku kuza kongeza isikolo sakho okanye ungacwangcisa qabane lakho phezulu ngoko umsebenzi akore kwezinye iindawo. Gcina amehlo ukuvula iibhloko wokuphindaphinda! ukuba kunokwenza umahluko omkhulu ukuba isikolo sakho ingakumbi xa udibanisa esithile ndawonye!
Ukususa yonke kodwa omnye umbala kungenza ukuba ezinye ezinkulu amanqaku amanqaku!
Filed Under: level 27, Uncategorized Tagged: Nceda, level 27, amacebiso
Pet ukuhlenga Saga – oko okuninzi inxaxheba kunokuba ubheka!
Izinto go 'Boom!’ ~ Pet Rescue babukele
Amacebo jikelele Pet Rescue netiphu
Thethana Pet Rescue Saga and Facebook
tips Top Pet Rescue namacebo
Pet Rescue Saga Level 26 Nceda
Phone Pet Rescue Saga Windows
Umxokozelo Pet Rescue Saga ukuba PC